निरंकुश बन्दै सरकार: 'समस्या निकाल्नेले समाधान पनि खोज्नुपर्छ' | Citizen Post News
काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थक एवम् अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले चिकित्सक केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘सरकारले नै अहिलेको समस्याको सिर्जना गरेको हो । अब यसको समाधान पनि सरकारले नै गर्न सक्छ ।’ डाक्टर केसीको अनशन आम नागरिकको पक्षमा रहेको उनको भनाई छ ।
दुई तिहाईको नाममा वर्तमान सरकार निरंकुश बन्दै गैरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौता पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ ।’ अबको समाधान भनेको नै सरकार लचिलो हुनुपर्ने उनले सुझाए । आफूहरुले अहिले संविधानको सर्वोच्चतामा रहेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीसँग गरेको सम्झौता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री भनेको त मुलुकको अभिभावक हो । अभिभावकले ढाँट्दैन् ।’
उनले भने,‘कतै प्रधानमन्त्री संसदमा अल्पमतमा त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उहाँले आँफै सम्झौता गरेको कुरा किन लागु गर्नुभएन ? किन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभएन ? प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले उदण्ड रुपमा बोल्न मिल्दैन् ।’ डाक्टर केसी निष्ठापूर्वक देश र जनताको पक्षमा अनशन बसेको भण्डारीको भनाई छ । तर, केसीको विरुद्धमा विजय थापा अनशन बसेको कुरालाई अनशनको रुपमा लिन नसकिने उनको तर्क छ ।
उनले भने,‘विजय थापा निष्ठापूर्वक अनशन बसिरहेका होईनन्, उनलाई कसैले उक्साएका छन् ।’ डाक्टर केसीका समर्थक डा. अभिषेक प्रताप सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरुलाई दुःख लागेको बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले हामीलाई दुःख लागेको छ । अब राज्यमाथि शंकाको प्रश्न उठेको छ ।’ सरकारले अहिले इगो देखाईरुहेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
सिंहले भने,‘डाक्टर केसी तीन करोड नेपालीको हित र पक्षमा सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । तर, सरकारले आँफै गरेको सम्झौता पालना गरेन । समस्या राज्यबाट नै सिर्जना भएको छ । अब समाधानपनि उहाँहरुबाटै हुनुपर्छ ।’ उनले वर्तमान सरकार मुद्दा केन्द्रित नभएको पनि जिकिर गरे । आफुहरु शान्तिपूर्ण रुपमा आवाज बुलन्द गर्ने पक्षमा रहेको उनले जनाए ।
चर्चित अभिनेता अमिताभ र अभिषेक बच्चन दुवैमा कोरोना संक्रमण
२०७७ असार २८ गते १०:०२
जम्बु र खागदलका बाढी पीडित ४३ घर-परिवारलाई राहत वितरण
२०७७ असार २७ गते २१:५७
बाढी र डुबानको जोखिम बढेपछि २ नम्बर प्रदेशमा 'उच्च सतर्कता'
२०७७ असार २७ गते १९:२६
सिन्धुपाल्चोकमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुग्यो
२०७७ असार २७ गते १७:१५
भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुग्यो, ८४४२ निको भए
२०७७ असार २७ गते १६:४६